माया लाउँदै नलाउनु वा माया दुईतिर लाउनु भन्दा एकतिर माया लाउनु राम्रो - Khusi Limbu
माया लाउँदै नलाउनु वा माया दुईतिर लाउनु भन्दा एकतिर माया लाउनु राम्रो
Home - Blogs - माया लाउँदै नलाउनु वा माया दुईतिर लाउनु भन्दा एकतिर माया लाउनु राम्रो
नेपाल पत्रकार महासंघको बेलायत शाखाको हालै सम्पन्न अधिवेशनबाट प्रिय बहिनी सिर्जना निङ्लेकु सचिव पदमा सर्वसम्मतिले चयन हुनुभएकोमा मलाई गर्व छ । उहाँ नेपालमा लामो समयसम्म रेडियो जोकी (आरजे) को रुपमा कार्यरत रहनु भयो । हाल बेलायत आएपछि उहाँ ब्लगर र भ्लगरको रुपमा बढी चिनिनुहुन्छ । उहाँ मोडलिङ गर्नुहुन्छ, धेरै म्युजिक भिडियो र केही चलचित्रहरुमा पनि अभिनय गर्नुभएको छ । बेलायत आएपछि उहाँ माउण्टेन नेपाल मिडियासंग आबद्द हुनुभयो र अहिले लिम्बू पत्रकार यूकेको सचिव हुनुहुन्छ । म यस अवसरमा उहाँलाई धेरै धेरै बधाई भन्दै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु ।
त्यस्तै बेलायतमा लामो समयदेखि कलम चलाइरहेका एक जना भाइ, जो फोटोग्राफर पनि हुनुहुन्छ, मनी सुवेदीजी पनि नेपाल पत्रकार महासंघको यूके शाखाको कोषाध्यक्ष पदमा सर्वसम्मतिले चयन हुनुभएको छ । कुनै बेला आफूलाई भोट दिने मनी सुबेदीले यस पटक भने भोट लगभग नदिने छाँटकाँट देखेपछि आफूलाई संस्थापन पक्ष भन्नेहरुले यस पटक मनी सुबेदीलाई नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यताबाट बञ्चित जो गराए । मनी सुवेदीजी अब एक्लो हुन पर्ने छैन । म यस अवसरमा प्रिय भाइ, नेप्समिडियाका पूर्व सञ्चालक तथा सम्पादक मनी सुबेदीजीलाई आज दोहोरो हार्दिक बधाई दिँदैछु । मैले सिलौटी टाइस्म्स मिडिया हाउस प्रा. लि. को तर्फबाट उहाँलाई आज मिति २२ जुन २०२१ को दिन सिलौटी टाइम्स डट कमको सम्पादक नियुक्त गरेको छु । पत्रकार हुँ भन्नेहरुले पत्रकारहरुलाई अवसर दिने हो, हात काटिदिने होइन । उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना छ भाइ ।
पत्रकार महासंघको सदस्यताबाट संस्थागत रुपमा नियतबस पाखा पारिएका माथि उल्लिखित पत्रकारहरु सिर्जना र मनी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । आफूलाई भोट दिने हो भने बाह्रखरी लेख्न नजान्नेहरुलाई सदस्यता दिने र आफूलाई भोट नदिने जस्ताहरुलाई पाखा लाउने षडयन्त्रको शिकार बनेका अन्य थुप्रै साथीहरुलाई बिपिन निरौला नेतृत्वको नेपाल पत्रकार महासंघ युकेमा स्वागत छ ।
त्यस्तै, आफू पत्रकारिता नगर्ने तर नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) यूके नामको दोकान खोलेर राजनीति गर्नेहरुले नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेको नेता बन्ने लोभमा फोनिज यूकेका आफ्नै सदस्यहरुलाई पत्रकार महासंघको दायरा भन्दा बाहिर राख्नु कम्ति मजाको कुरो छैन । फोनिज यूकेको निवर्तमान महासचिव कर्मा पहाडी शेर्पा जो ग्लोबल दैनिकको सञ्चालक तथा सम्पादक हुनुहुन्छ, बिगत १२ बर्षदेखि निरन्तर पत्रकारिता गरिरहनुभएका लिम्बू पत्रकार संघ यूकेका अध्यक्ष अमित थेबे जो अहिले सिलौटी टाइम्स डट कमका प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ, र फोनिज यूकेको पूर्व सहकोषाध्यक्ष बिमला लिम्बू जो नेपाल मामिलाको प्रवन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ, उहाँहरु सबै फोनिज यूकेका सदस्य हुन् । तर पत्रकार महासंघ यूकेको नेता बन्न लोभमा फोनिज यूकेकै केहीले आफ्नै संगठनका सदस्यहरुलाई एफएनजेको सदस्यता दिलाउनमा कति पनि रुची लिएनन् ।
धेरैको जिज्ञासा छ अहिले – यति सानो समुदाय नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेको अहिले दुई टुक्रा हुनुको किन भयो? जगजाहेर होस् एउटा कारण त यही नै हो ।
बिपिन निरौला नेतृत्वको नेपाल पत्रकार महासंघ यूकेमा मेरो पनि नाम देखिएपछि मेरा धेरै आफ्ना मान्छेहरुले सोधे – “एनआरएनए यूकेको चुनावमा तपाई उठ्दै हुनुहुन्छ । यसले तपाईंको उम्मेदवारीलाई असर त पार्दैन ?”
मैले भनें – “पार्न सक्छ तर तात्विक रुपमा असर पार्दैन । जो मेरा थिए, ति मेरा हुन् र सधैं रहिरहने छन् । उहाँहरुले मलाई राम्ररी बुझ्नुहुन्छ कि म सत्य र न्यायको पक्षमा सधैं बोल्दै आएको छु ।”
राजनीतिमा जोखिमको गुञ्जायस रहन्छ । मुस्स हाँसेर मीठो कुरा गर्न त सबैलाई आउँछ । चुनावको मुखमा आएर सबैको प्रिय बनेर भोट माग्नु त सकिएका तर तर नचिल्ने माहुरीले मह बनाउँदैन ।
अन्तमा, एउटा दोहोरी गीत उदघृत गर्दै आजको यो ब्लग अन्त गर्न चाहें
“… कि लाउ मायाँ उइतिरकि लाउ मतिरहौ निर नलाउ दुईतिर …”
अर्थात, मेरो लागि यो समय कसैलाई साथ नदिनु वा सबैतिर ठिक्क पारेर आफ्नो दुनो सझ्याउनु भन्दा कुनै न कुनै पक्षलाई साथ दिनु उचित ठानें । म अन्यायमा परेका पत्रकार मित्रहरुको साथमा छु । दुई चार भोट बढ्ने लोभमा म यो राजनीतिमा दुर्योधन र दुशासनहरुको साथ दिन सक्दिन । म पाण्डवहरुको साथमा छु । एनआरएनएको चुनाव त दुई बर्षपछि फेरि आइहाल्छ तर अन्यायमा परेका पत्रकारहरुको पक्षमा केही बोल्न पाउने मेरो अवसर सधैं नआउला । त्यसैले मैले चुनावको मुखमा आएर पनि बिपिन निरौला नेतृत्वको एफएनजे यूकेलाई साथ दिएको छु ।
बाँकी कुरा समयले बताउला ।